Iimpahla zeyoga, iimpahla zomntu ofanelekileyo, iBlack Sports yabasetyhini, iiShoti zamadoda-iArabella
Uyilo olukhoyo MOQ ephantsi
Iifayile + zeesweatshirt
Iidyasi + zeebhatyi
I-T-Shirt + Iitanki
AKUKHO ZINKCUKACHA AKUKHO MPUMELELO
Sinezixhobo eziphambili njengasezantsi ukuqinisekisa amandla emveliso kunye nomgangatho.
1. Umatshini wokuhlola amalaphu ukuqinisekisa umgangatho wezinto ezingenayo.
2. Umatshini wangaphambi kokuncipha kumatshini wokulawula ukuqina kwelaphu ukwenza ubungakanani bengubo ibesemgangathweni ngakumbi.
Umatshini wokusika we-3.Auto ukulawula zonke iipaneli zokusika kumgangatho ozinzileyo kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
4. Inkqubo yokuxhoma ngokuzenzekelayo ukuphucula amandla emveliso.
Sinenkqubo epheleleyo yokuhlola imveliso, ukusuka kuvavanyo lwezinto, ukusika ukuhlolwa kweepaneli, ukuhlolwa kwemveliso egqityiweyo, ukugqiba imveliso yokuhlola ukuqinisekisa umgangatho wemveliso. Ukuze umgangatho ulawule kuwo onke amabakala.
Sineqela elomeleleyo le-R & D elibandakanya umyili, abenzi bepateni, abenzi beesampulu ukukunceda ukuba uphuhlise iimveliso ezintsha.
Sineqela elomeleleyo lokuthengisa ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo kwiodolo yakho. Banobuchule kwaye banomonde ngamava atyebileyo.
Imidlalo yabasetyhini ye-S2020014
Imidlalo yabasetyhini ye-S01946
Imidlalo yabasetyhini ye-X200AQA001
I-T-shirt yabasetyhini i-X200245
Imidlalo yabasetyhini ibra X200114
Iibhulukhwe ezimfutshane zabasetyhini S2020015
Imilenze yabasetyhini SO1947-3
Iifutshane zabasetyhini iX200251
Ibhulukhwe yabasetyhini SP20-01-03
Imidlalo yabasetyhini ibra SP20-01-02
Abafazi Fitness Sportswear Gym Full Length Umlenze ...
Abafazi abaleka itanki ezemidlalo iimpahla ezemidlalo yoga umthambo ...
UArabella wayelishishini losapho elaliyimveliso yokuvelisa. Ngo-2014, abantwana abathathu bakasihlalo babona ngathi banokwenza izinto ezizezabo bebodwa, ke baseta iArabella ukuba ijolise kwiingubo zeyoga nakwimpahla yokuqina.
Ngokunyaniseka, umanyano, kunye noyilo loyilo, iArabella iphuhlisiwe ukusuka kumatshini wokulungisa omncinci we-1000-square-meter ukuya kumzi-mveliso onamalungelo wokungenisa nokuthumela ngaphandle elizweni namhlanje kwi-5000-square-meter. U-Arabella ebenyanzelisa ekufumaneni itekhnoloji entsha kunye nelaphu lokusebenza okuphezulu ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kubathengi.
U-Arabella uxakekile kwimveliso ngoMatshi
Ibhaso leArabella laBasebenzi abaGqwesileyo abaThuthayo
Ukuqala okuhle kweNtwasahlobo Seaon-New Cus ...
Iqela lika-Arabella libhiyozela i-Interna ...
Iqela leArabella libuye kwakhona
4 # Building 2-3 / F, No. 354, Jiyin Road, Tong'an District, Xiamen City, kwiPhondo Fujian, 361100, China
IIYURE ezingama-24 KWI-LINE
Sithumele ulwazi ngoku